I-Eikre Fjellgaard yifama endala kwiintaba zaseHemsedal. Singabafana ababini abaqhuba ifama, u-Ola, owazalelwa wakhulela efama, kunye no-Arnt oweza apha kwiminyaka emi-4 eyadlulayo. Ootatomkhulu nootatomkhulu baka-Ola, uKari noNils, baqala indlu yeendwendwe apha efama ngo-1920 ukwenzela ukuba ngabakhenkethi ehlotyeni nangexesha lePasika. Utatomkhulu nootatomkhulu baka-Ola baqhubeleka nokuqhuba indlu yeendwendwe kwaye bayandisa indlu kakhulu ngo-1947 ngoko ke ngelo xesha yayingamagumbi eendwendwe ali-13. Ngoku sizama ukuqhubeka xa utatomkhulu nomakhulu ka-Ola wayekwa ngo-1964.
Igumbi le-12 likwindlu enkulu kwaye linebhedi ephindwe kabini kunye nomabonwakude, unomathotholo kunye negumbi lokuhlambela. Kukho ithuba lokusebenzisa ikhitshi eqhelekileyo kumgangatho ofanayo.